गृहमन्त्रालयले एक्कासी किन गर्यो प्रहरीका ७२ डिएसपीको सरूवा, को कहाँ पुगे ? हेर्नुहोस सूचीसहित — Sanchar Kendra
गृहमन्त्रालयले एक्कासी किन गर्यो प्रहरीका ७२ डिएसपीको सरूवा, को कहाँ पुगे ? हेर्नुहोस सूचीसहित
काठमाडाैं । गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका ७२ प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी)हरूको सरूवा भएको छ। गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले भदौ महिनादेखिको तलब, भत्तासमेत सरूवा भएको दरबन्दीबाट खान पाउने गरी ७२ डिएसपीहरूको सरूवा गरेको हो।
राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगन्ज, काठमाडौंमा कार्यरत् अनुपम श्रेष्ठको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा सरूवा भएको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटीमा अपिलराज बोहराको सरुवा भएको छ। कालिमाटी वृत्तमा कार्यरत् रुगम कुँवरको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा सरुवा भएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्याल उदयपुरमा कार्यरत् गोविन्द पुरीको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल सरुवा भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा देवेन्द्र पाण्डेको सरुवा भएको छ। इटहरीमा कार्यरत् धर्मराज भण्डारीको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सरुवा भएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा कार्यरत् विनोद शर्माको एक नम्बर प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रमा सरुवा भएको छ। जुम्लामा माधव काफ्लेको सरुवा भएको छ। योगेन्द्रसिंह थापाको अछाम जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सरुवा भएको छ। त्यस्तै, संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय कार्यालय काभ्रेकी अन्जना श्रेष्ठको प्रहरी प्रधान कार्यालय सुरक्षा सेवा व्यवस्थापन निर्देशनाय नक्सालमा सरूवा भएको छ।
महानगरीय अपराध महाशाखाका उद्धवसिंह भाटको बागमती प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय हेटौंडामा सरूवा भएको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त, जगातीका डिएसपी चक्रराज जोशीको महानगरीय सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय महाराजगन्जमा सरूवा भएको छ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले लामो दूरीका सवारीसाधन तथा आन्तरिक उडान भदौ मसान्तसम्म स्थगित गरेको छ। आइतबार साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकले यसअघिको निर्णय परिमार्जन गरी लामो दूरीका सवारीसाधन र आन्तरिक उडान सारेको हो।
स्रोतका अनुसार कोरोना संक्रमणको विद्यमान अवस्थालाई मध्यनजर गरी यो निर्णय भएको हो। ‘विद्यमान कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर लामो दूरीका सवारीसाधन र आन्तरिक उडान गर्न तत्काल सम्भव देखिएन,’ एक मन्त्रीले सेतोपाटीसँग भने।
यसअघिको निर्णयमा भदौ १५ देखि आन्तरिक उडान तथा लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। राजधानीमा कोरोना भाइरसका संक्रमित बिरामी बढिरहेको बेला मन्त्रिपरिषदले साबिकको निर्णयमा पुनर्विचार गरेको हो।
कोरोना महामारी बढेपछि राजधानी काठमाडौंमा करिब दुई सातायता निषेधाज्ञा जारी छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञाको समय बढाउन खोजिरहेका बेला मन्त्रिपरिषदबाट यस्तो निर्णय आएको हो।